WARBIXIN: 10-ka Xiddig Ee Ugu Qiimaha Badan Yurub Oo La Soo Saaray, Neymar Oo Hogaaminaya & Coutinho Oo Laga Dhex Waayay – Kooxda.com
Home 2018 January France, Ingiriiska, Italy, Jarmalka, Spain, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: 10-ka Xiddig Ee Ugu Qiimaha Badan Yurub Oo La Soo Saaray, Neymar Oo Hogaaminaya & Coutinho Oo Laga Dhex Waayay
WARBIXIN: 10-ka Xiddig Ee Ugu Qiimaha Badan Yurub Oo La Soo Saaray, Neymar Oo Hogaaminaya & Coutinho Oo Laga Dhex Waayay
Philippe Coutinho ayaa dhamaystiray ku biiristiisa Barcelona isaga oo 145 milyan kaga soo biiray kooxda Liverpool laakiin wali kamuu soo muuqaan xiddigaha ugu qiimaha badan yurub.
Sida laga soo xigtay xogta CIES Football Observatory, Xiddiga cusub ee Barcelona waxa uu ku soo baxay kaliya 16aad, waxaana lagu qiimeeyay £ 109m.
Taasi waxay ka dhigan tahay, iyadoo ku saleysan arimo sida da,da, Kulamada uu safto xulka qarankiisa iyo waliba kulamada Barcelona in ay ku bixin doonto lacag dhan 36 milyan oo euro.
Waxa sidoo kale ka baxsan 10-ka xiddig ee ugu sareeya xiddigo waaweyn oo ay ka mid yihiin xiddigaha Mohamed Salah, Leroy Sane, Luis Suarez iyo Raheem Sterling.
Laakiin yaa ku soo baxay 10-ka xiddig ee ugu qiimaha badan yurub?
Kaalinta ugu horaysa waxa si la yaab leh ugu soo baxay xiddiga kooxda PSG ee Neymar kaas oo lagu qiimeeyay 189 waxana uu xagaagii xiddiga ugu qaalisan ugu soo biiray PSG isaga oo 198 milyan kaga tagay Barcelona.
Waxa xiddiga reer Brazil ku xiga xiddigii hore ee ay isku kooxda ahaayeen ee Lionel Messi kaas oo u qalma ama lagu qiimeeyay 179 milyan isaga oo dirqi uga kor maray xiddiga kooxda Tottenham ee Harry Kane.
Xiddiga reer England ayaa fadhiya kaalinta 3-aad waxana lagu qiimeeyay 172 milyan euro halka xiddiga ay isku kooxda yihiin ee Dele Alli fadhiyo kaalinta 6-aad isaga oo lagu qiimeeyay 152 milyan.
Xiddiga kooxda PSG ee Kylian Mbappe ayaa lagu qiimeeyay 170 halka Paulo Dybala lagu qiieeyay 155 milyan.
Xiddiga kooxda Man city ee Kevin De Bruyne oo fadhiya kaalinta 7-aad ayaa lagu qiimeeyay 149 sida ay wabixintu sheegayso.
Xiddiga kooxda Man United ee Rome Lukaku oo xagaagii Red Devils ugu biiray lacag dhan 75 milyan euro ayaa isagu ka soo buuxqday.
Xiddiga reer Belgu ayaa lagu qiimeeyay 146 milyan isaga oo ka horeeya xiddiga reer France ee Antoine Griezmann oo lagu qiimeeyay 133m isaga oo fadhiya kaalinta 9-aad.
Xiddiga ay Lukaku isku kooxda yihiin ee Paul Pogba oo 18 bilood ka lagu soo iibsaday 89 ayaa haatan lagu qiimeeyaa 131 sida ay xogtu sheegtay